Messi Oo Shaaciyay Shaqsigii Uu Kala Tashtay Sii Joogida Barca Ka Hor Inta Uu Heshiis Kordhin Sameyn %
Lionel Messi, ayaa wuxuu qiray in dhamaan xubnaha qoyskiisa ay doonayeen inuu kusoo laabto wadankiisa hooyo ee Argentina, ka hor inta uusan heshiis kordhin usameyn Barcelona, markaasoo uu qalinka ku jiiday qandaraas waqti dheer ah.
Laakiin, laacibkaan ku guuleystay Shanta jeer abaalmarinta xidiga aduunka ugu fiican oo ay bixiso FIFA, ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in shaqsi ahaantiisa uu ku qanacsanaa joogitaanka Barcelona, islamarkaana uu taasi ku taageearay aabihiisa.
“Walaalaheyga iga weyn inaga, waxay ku fikirayeen inaan dib ugu laabto Argentina,” ayuu Messi ku sheegay wareysi dhinacyo badan ka hadlaya oo uu siiyay America TV.
Waxay doonayeen inuu ku laabto Magaaladii uu ku dhashay ee Rosario, waxaa sidoo kale go’aankaas ku raacsaneen hooyadiisa iyo waliba walaashiisa.
“Walaashey iga yar iyo waliba waalidiinteyda waxay qaateen go’aanka aan dib ugu soo laabanayo, marka waxay utimid arrintu aniga iyo aabaheyga,” ayuu sii raaciyay.
Markaas kadib aabiisa oo lagu magacaabo Jorge, wuxuu ahaa mid aad murugeysan, laakiin wuxuu mar walba ahaa mid go’aanka Leo udaaya.
“Wuxuu iweydiiyay [maxaan sameynaa? Go’aanka adiga ayaa iska leh,” ayuu Leo Messi cod dheer ku sheegay, isagoo dib usoo xusuusanaya.
Laakiin, Messi wuxuu ahaa mid aanan shaki badan uga jirin in kubadiisa ay wali ku harsan tahay Gobolka Catalonia, uuna wali doonayo inuu sii joogo.
“Waxaan usheegay inaan doonayo inaan joogo, waana wali halkaan ku qanacsanahay, waxaana ogaa inaan haysto fursad weyn [oo aan Barceona ku sameyn karo],” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Lionel Messi.
Sikastaba, labadda dhinac ayaa waxay isku raaceen go’aankaas oo ahaa inuu Leo heshiis cusub saxiixo, iyadoona Jorge Messi, uu ku waaqay go’aanka uu qaatay waalkiisa, iyagoona sidaas taariikhdoodii Barcelona iyo kubadda cagta halkooda kasii waday.